Medicine "Diazolin" (Between igama "mebhydrolin".) - umuthi, okuyinto iminyaka eminingi esetshenziselwa ukwelapha komzimba e abadala kanye nezingane. Lesi sidakamizwa kungokwalabo antihistamine, noma ukuvimba ka histamine H1-receptor. Naphezu kweqiniso lokuthi namuhla emakethe ezithaka imithi isiRashiya, kukhona kweshumi eziningana ngezindlela ezifanayo, imithi "Diazolin" namanje ethandwa kakhulu, ngokuba ezindaweni ezahlukene ezindaweni yesithathu neyesine ngokuya yokuthengisa in the angafundwa Isikali iqembu. Yiqiniso, okokugcina, lesi simo kungenxa wentengo ongaphakeme, kodwa akuyona lokhu kuphela: izidakamizwa umise ngokwaso njengoba ephumelela, izindlela ephumelelayo ngokushesha ziletha impumuzo.
"Diazolin" imithi enqunyiwe izingane kanye nabantu abadala ngohlobo oluthile yokungezwani komzimba. It ngempumelelo aqede edema mucosal, kususa ukulunywa futhi ukuqubuka. isicelo saso singasetshenziswa Kunconywa dermatitis atopic, hay fever, urticaria, eczema, isifuba somoya. Izidakamizwa "Diazolin" Umhlahlandlela zezingane kwi isicelo uncoma akunika izingane, kuhlanganise, futhi isinambuzane Ukulunywa: ukuthatha kunomthelela ukuqedwa okusheshayo ukulunywa futhi ukunciphisa ukuvuvukala. Nokho, lo muthi, kanye nabanye abaningi, akudingekile ukuba amise izingane zabo siqu: ukusetshenziswa kwalo has Izimo sina.
Izidakamizwa "Diazolin" izingane (umyalelo ku ekuphathweni izidakamizwa unaka ngokukhethekile kulokhu), kanye "omdala" Isikali akufanele kuthathwe labo abaphethwe peptic isilonda isifo. Lesi sidakamizwa has impahla obulimaza isisu, ngakho-ke ezinqunyiwe ngokuqapha, futhi kolwelwesi. Ngaphezu kwalokho, kuyindida ukuthi kukhona amacala yokungezwani komzimba kanye self imithi "Diazolin" owabonakaliswa ukulunywa futhi ukuqubuka. Ngakho-ke, uma izidakamizwa esithathwayo kakade isikhathi eside, kodwa isimo lesiguli sibe sibi, kubalulekile ukuba ubonane nodokotela - mhlawumbe kukhona icala ukungabekezelelani zayo ngazinye. Izimo Ingabe Ohulumeni Banalo Lonke ukuba ukusetshenziswa kwezidakamizwa ukuthambekela sokuwa kanye engu-iminyaka emibili.
Nomuthi "Diazolin" izingane - yokusetshenziswa zomuthi ke ugcizelela - lihlukile ukwelashwa abadala, ngaphezu kwakho konke, umthamo yayo. Kokunye dragees izingane - 0.05 g Diazolin abadala - 0.1 g Kids abaneminyaka engama ezimbili, abeke pellet edilini lomshado, kuze kube izikhathi ezingamashumi amabili ngosuku, eminyakeni engaphezu kwemihlanu - izikhathi ezimbili kuya kwemithathu. ngqo I umthamo wansuku zonke kanye nenani reception ekulungisweni kunqunywa udokotela. Kungase zingancishiswa ngoba isibindi nezinso. Ngaphandle dragees, izingane ezikhishwe izidakamizwa "Diazolin" ngesimo granules. Kulawa, slurry ibhalwe ngokungeza umfuma 100 ml esishisayo (+40 - + 50 ° C) amanzi abilayo futhi kahle ibangele okuqukethwe imizuzu embalwa. A umthamo owodwa we-ukumiswa ngoba abantwana kweminyaka emibili noma emithathu kuyinto 2.5 ml amane - eziyisithupha - 5 ml, eziyisikhombisa - eziyishumi - 7.5 ml. Take it kathathu ngosuku ngaphambi kokudla ngempela zazamazama. Thatha lesi sidakamizwa "Diazolin" isitatimende (Wezingane) uncoma izinsuku 5-7. Ubude Yiqiniso abadala esabekwa udokotela ukuba khona, esekelwe esimweni nobukhali komzimba.
imiphumela emibi izidakamizwa bangase balwisane ngenxa ethola "omdala" umthamo nangemva nokuphathwa izidakamizwa "Diazolin izingane." Yokusetshenziswa ukhuluma mayelana nokwenzeka ubuhlungu esiswini, nomlomo owomile, ukozela kanye ukukhathala, angaboni kahle. Nokho, Ngokuvamile, zingabantu ngenxa izidakamizwa ukweqisa izidakamizwa. Ezimweni eziningi kwamukeleka kahle kanye nabantu abadala kanye seziguli ezisencane, futhi kungenziwa Kunconywa ukuba wamukele kokubili kahle ngokungabi bikho Izimo antihistamine.
Analog "Diazepam": izinkomba, yokusetshenziswa
"Wedding Kuhle yomngani": abadlali abadlala kuleli ifilimu